Somaliland.Org » Baaqa Shirweynaha Labaad ee Xisbiga Kulmiye 29 – 31 March, 2008
Baaqa Shirweynaha Labaad ee Xisbiga Kulmiye 29 – 31 March, 2008
March 31st, 2008 Comments Off Waxa dalka ka taagan abaaro baaxad leh, waxa marka hore Xisbiga Kulmiye ergooyinka Shirweynihiisan ka codsanayaa in jamacaeenanu duceeyo ilaahna ka barino inuu inoo shubo raxmad khayr qabta oo lagu rayrayyo. Alla ha inaga aqbalo.
Xaaladda gudaha: Hordhac
Mudanayaal iyo marwooyin, Waxa marka hore Xisbiga Kulmiye qirayaa oo aad ugu nuuxnuuxsanayaa in Nabadda Somaliland ka jirtaa tahay mid Ilaahay ka sokow uu dadweynuhu suurageliyey, hormarka iyo dib u dhiska dhaqaale ee jirana waxa dhaliyey hantiileeyda Somalilayn (private sector) iyo qurbajoogga oo kaalin halbawle ah kaga jira dib-u-dhiska dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, Waxa meelsha ka maqan kaalintii xukuumadda oo ahayd, inay ugu yaraan, abuurto jawiga siyaasadeed iyo sharci ee horumar dhab ahi ku dhici lahaa. Dhab ahaantii,Xukuumadda jirtaa wax micno leh kuma darsan isbedeelka ka socda Somaliland, bilcakas, dhaqaalihii iyo hantidii ay dawladu maamulaysay waxay noqdeen kuwo si xun loogu takri falo oo jeebab gaar ah ku dhacda.
Xaaladda Adag ee ka Jirta Dalka
Mudanayaal iyo Marwooyin, Raja beelka haysta dadweynaha waxa ka marag kacaya xawliga ay dalka uga qaxayso dhalinyaradu oo ah ubaxii wadanka, markii ay xukuumaddii xilka loo dhiibay ku guul darraystay inay iska dhaafo duruufo shaqo iyo kuwo waxbarasho oo ay abuurto, ay ku guul darraysaray inay xitaa rajo u abuurto. Mudanayaal iyo marwooyin, Rajo beelka dhalinyardu waxay keentay in da’ yartii reer Somaliland ay tarab tarab uga baxaan dalka iyagoo naftooda ku biimaynaya dhul iyo deegaano aad u khatar ah – taasoo keentay in kuwo badan ay ku geeriyoodaan lama degaanada sida Saxaaraha weyn ee Afrika, kuwo kale ku qarraqmaan badaha cas iyo bada cad, kuwo kale ay ku xidhan yihiin xabsiyo dalalka jaarka. Maanta, dhalinyaradu si isku mid ah ayay uga wada qaxdaa Hargeysa oo nabad ah iyo Muqudish oo dagaalo is dabajoog ahi ka socdeen. Waxay is weydiintu tahay maxaa eryaya da’yarteena oo ku kalifay inay naftood waxaas oo biime ah geliyaan? Jawaabto waa mid keli ah. Waxa jira rajo beel, dadkana haddii ay rajadu ka dhimato waxa walba waa ka suuragal.